မြန်မာတွင် အင်ဂျင်နီယာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် နိုင်ငံခြားသား အင်ဂျင်နီယာ အများစုသည် တရားမဝ - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံတွင်လာရောက်ပြီး အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် နိုင်ငံခြားသား အင်ဂျင်နီယာအများစုသည် တရားမဝင်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပြီး ကောင်စီတွင် လာရောက်မှတ်ပုံတင်ထားသူ ၂၂ ဦးသာရှိကြောင်း မြန်မာ နိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီမှ တာဝန်ရှိသူများကပြောသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လမ်းမတော် မြို့နယ်၊ အမှတ်(၅/က) ခရေပင် လမ်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာ ကောင်စီရုံးတွင်ကျင်းပသည့် မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာကောင်စီ ပဉ္စမမြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနား မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာ ကောင်စီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တိုးတက်မှုအခြေအနေများ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းအခမ်းအနားတွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာ ကောင်စီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာ ဦးချိုဝင်းမော်က ”မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်လုပ်ကိုင်သူအများစုက အင်ဂျင်နီယာလုပ်မယ်ဆိုပြီး လာကြတာမဟုတ်ဘူး။ တိုးရစ်အနေနဲ့လာပြီးတော့ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ နိုင်ငံခြားသား အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်က မြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီး လုပ်ကိုင် မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသား တစ်ဦးနဲ့တွဲပြီး လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်ဂျင်နီယာအလုပ် လာရောက်လုပ်ကိုင်သူ နိုင်ငံခြားသားအများစုသည် တိုးရစ်ဗီဇာများဖြင့် လာရောက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာ ကောင်စီတွင် လာရောက်မှတ်ပုံ တင်ထားခြင်းမရှိဘဲ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေခြင်းကြောင့် တရား မဝင်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာ ကောင်စီအသင်းတွဲဖက်အတွင်း ရေးမှူးဦးတင်လတ်က ”ကောင် စီမှာ မှတ်ပုံတင်မထားရင် တရားမဝင်ပါဘူး။ အခုဘာဖြစ်နေသလဲ ဆိုရင် သူက တိုးရစ်ဗီဇာနဲ့လာတယ်။ ပြီးတော့ ဒီမှာအလုပ်လုပ်တယ်။ သုံးလလောက်ပြီးရင် ပြန် သွားတယ်။ ဒါတွေကို သေချာကြီး ကြပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကျောက်ဆည်ဘက်မှာရှိတဲ့ ဘိ လပ်မြေစက်ရုံကိုသွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာ တရုတ်အင်ဂျင်နီယာလို့ အမည်ခံထားတဲ့သူ ခုနစ်ဆယ် ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။ ဘာမှ စစ် ဆေးမှုမရှိပါဘူး။ ဒါတွေကိုစိစစ် ဖို့ရာက လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အာဏာပိုင်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးကြပ် မှုအာဏာပိုင်၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းအာဏာပိုင်များရဲ့ အခန်းကဏ္ဍသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်နီယာကောင်စီရဲ့အခန်းကဏ္ဍက အရည်အချင်းရှိတဲ့ အင်ဂျင်နီယာဟုတ်၊ မဟုတ် စိစစ်ပြီး အသိအ မှတ်ပြုပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ အချိန်မှာ နိုင်ငံခြားသား အင်ဂျင် နီယာတွေ မြန်မာပြည်ထဲမှာ အလုပ် လုပ်နေတာတွေ အများကြီးပဲ”ဟု ပြောသည်။
နိုင်ငံခြားသားအင်ဂျင်နီယာများ တရားမဝင်လာရောက်လုပ် ကိုင်ဆောင်ရွက်နေခြင်းကြောင့် နိုင်ငံအတွင်းမှာ အင်ဂျင်နီယာများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်း နည်းပါးခြင်း၊ နိုင်ငံအတွက် အခွန် အခမရရှိခြင်းများအပြင် အခြားသက်ရောက်မှုများစွာရှိကြောင်း သိရသည်။ ဦးတင်လတ်က ”ကျောက်ဆည်ဘိလပ်မြေစက်ရုံတောင်တစ်သုတ်ကို ခုနစ်ဆယ်ကျော်လောက်ရှိတယ်။ ဒါကစက်ရုံတစ်ရုံပဲရှိ သေးတယ်။ နောက်ထိုင်းနယ်စပ် တစ်လျှောက်မှာလည်း ထိုင်းတွေချည်းပဲ။ တရုတ်နယ်စပ်မှာလည်း တရုတ်တွေကြီးပဲ။ ဒါတွေတွက် ကြည့်လိုက်ရင်တောင် အများ ကြီးရှိပါတယ်။ ဒါတွေကိုထိန်းချုပ် ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်”ဟု ဆက်လက် ပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာ ကောင်စီတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် နိုင်ငံခြားသားအင်ဂျင်နီယာ ၂ဝ ကျော်သာရှိသေးကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာကောင်စီ၏ အချက် အလက်များအရ သိရသည်။
ရန်ကုန်လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိလာသော ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၏ ခြောက်သန်းမြောက် ခရီးသည်ကို ငွေသားနှင့် ပစ္စည??
နွေရာသီသောက်သုံးရေ အခက်အခဲကြုံနေသည့် ကျေးရွာများသို့ နေ့စဉ်သောက်သုံးရေများ ဖြန့်ဝေလှူဒါ??
မိုးအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းနေမှုကြောင့် ကလေး-မင်းကင်း လမ်းပိုင်း ပြိုကျပျက်စီးမှု မကြာခဏဖြစ်ပွား